Kenya ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo shilkii diyaaradeed ee ka dhacay Soomaaliya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kenya ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo shilkii diyaaradeed ee ka...
Kenya ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo shilkii diyaaradeed ee ka dhacay Soomaaliya
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Kenya ayaa ku baaqday baaritaan deg deg ah kadib diyaarad bini’aadannimo oo gacan ka geysata dagaalka ka dhanka ah coronavirus-ka ee ku dhacay Soomaaliya duruufaha “aan caddayn”, halkaas oo ay ku dhinteen lixdii qof ee saarnaa.
Diyaaradda xamuul ee gaarka loo leeyahay ee Kenya ayaa waday howlo samafal oo la xiriira cudurka faafa markii ay ku burburtay galabnimadii Isniinta degmada Bardaale ee koonfurta Soomaaliya, oo qiyaastii 300km (180 mayl) waqooyi-galbeed ka xigta caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, wasaaraddu waxay sheegtay Talaadadii.
“Diyaaradda waxay ku dhaceysay inay ku degto garoonka diyaaradaha Bardaale markii ay burburtay oo ay ku hoobtay dab. Lixda qof ee saarnaa diyaaradda ayaa dhintay,” ayuu yiri Abdulahi Isack, oo ah sarkaal ka tirsan booliiska maxalliga ah, wakaaladda wararka ee AFP.
“Ma garanayno waxa saxda ah ee keenay inay diyaaradda sidato sahay caafimaad oo ay wax ku dhacaan, laakiin waxaa socda baaritaan lagu ogaanayo faahfaahinta.”
‘Naxdin qoto dheer’
Kenya ayaa ku boorrisay Soomaaliya “inay si fiican oo dhakhso ah u baarto arrinta sababta oo ah waxay saameyn ku yeelata howlaha gargaarka bini’aadminimo waqti aad loogu ugu baahi badan”.
“Dhacdadu waxay ku dhacday duruufo aan caddayn,” ayay wasaaradda arrimaha dibedda ku sheegtay hadal ay soo saartay, iyadoo muujisay “naxdin qoto-dheer oo qoomamaysa” waxayna tacsi u dirtay qoysaska dadkii dhintay.
“Kenya iyo diyaaradaha kale ee samafalka ee ka howlgala gobolka ayaa sidoo kale lagu boorinayaa inay kordhiyaan taxaddar dheeraad ah marka loo eego duruufaha aan caddayn ee ku xeeran shilka,” ayay tiri wasaaraddu.
Kooxda hubaysan ee al-Shabab ayaa ku firfircoon koonfurta Soomaaliya, laakiin aagga uu shilku ka dhacay waxaa gacanta ku haya dowladda iyo ciidamada Itoobiya.
Askarta ka socota Itoobiya iyo Kenya ayaa ka mid ah kuwa loo diray Soomaaliya iyagoo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika (AU) si ay ula dagaallamaan fallaagada hubaysan.
Af hayeen u hadlay Ciidamada Difaaca Qaranka Itoobiya ayaa sheegay in uusan haynin wax macluumaad ah oo ku saabsan shilka wuxuuna su’aalo u diray “taliyeyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya”.
Hadal qoraal ah, wasaaradda gaadiidka iyo duulista rayidka Soomaaliya ayaa muujisay inay aad uga xun tahay shilka waxayna sheegtay in dowladdu ay wado “baaritaan buuxa”.
Waxay sheegtay in Embraer 120 mataano-turboprop ay maamusho shirkadda African Express, oo xarun ku leh Nairobi ay burburtey.
Diyaarad ka soo duushay garoonka ayaa ku dhacday diyaaradda markii ay ku soo dhowaatay garoonka diyaaradaha, Axmed Isaaq, oo ah mas’uul ka tirsan maamulka gobolka Koonfur Galbeed, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press.
Shilka ayaa yimid xilli xiriir adag uu ka dhexeeyay Kenya iyo Soomaaliya.
Bishii la soo dhaafay, Kenya waxay ku eedaysay ciidamada Soomaaliya “weerar aan la damacsaneyn” ah oo ka dhacay xadka u dhow Mandheera, oo ah waqooyiga bari kenya, iyagoo ku tilmaamay dhacdadaas mid kacsan.
Dhanka kale Soomaaliya waxay muddo dheer ku eedeysay deriskeeda weyn inay faragalin ku hayso arrimaheeda gudaha, waa wax Kenya diiday.
Previous articleWarbixintii ugu danbeysey Itoobiya iyo Hal bukaan oo COVID19 u dhintey.
Next articleSheekh shariif oo teleefanka kula hadley safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Amb Ben Fender
Komishanka doorashooyinka somaliland oo la kulmaysafiirka midowga yurub